Mashruuca Biyo-Boobka Badda, Daraasadda Kiisaska Marina ee Kala-baxa
Kala Bixinta Baddaha Kala Bixinta Wadada ee Bilowga Maarso
Qulqulka Harbor Town Yacht Basin ee Hilton Head Island wuxuu umuuqdaa inuu usocdo sidii loo qorsheeyay, in kasta oo farsamo xumada, daadinta iyo dayactirka dhuumaha, sida lagu sheegay warbixinnada kormeerka maalinlaha ah.
Shaqadu waxay bilaabatay Dec. 4 si loo furfuro gunta doonta. Goobaha Gull Point iyo marinada South Beach iyo Braddock Cove ee gudaha Badda Badda sidoo kale waa la daadinayaa.
Ilaa hadda, qiyaastii 56,000 dhudhun oo laba jibbaaran oo wasakh ah ayaa laga saaray kanaalka laga soo galo iyo sagxadda dibedda, sida laga soo xigtay kormeeraha hoggaamiyaha iyo maamulaha mashruuca Larry Setzler ee injineernimada GEL.
Crews ayaa shaqada ku soo laabatay jimcihii ka dib afar maalmood oo nasasho ahayd oo la xiriiray ciidda Kirismaska ​​oo ay nadiifinayaan salka gudaha.
Isku soo wada duuboo, qandaraaslaha Orion Marine Construction Inc. wuxuu qorsheynayaa inuu ku rido in ka badan 240,000 yacdi yaadi oo jiingad ah goob 100-hektar ah oo ku taal afka Calibogue Sound, oo qiyaastii mayl u jira suulka jasiiradda iyo 1.5 mayl u jirta Daufuskie Island. Jawiga xoogan ee dhawaqa waa inuu ku daadiyaa jiinka badda, sida ay sheegeen Injineerada Ciidanka Mareykanka.
"Waxaan rajeyneynaa inaan dhameystirno doonta markabka illaa bartamaha bisha Janaayo oo aan u dhaqaaqno dhanka Braddock Cove creek isla markaana aan u marno isla nidaamkaas si aan u qodno marinnada South Beach iyo Gull Point," ayuu yiri Setzler Jimcihii.
Mashruuca oo dhan waa in la dhammeeyaa horraanta Maarso, sida laga soo xigtay Setzler iyo Mark King, oo ah guddoomiyaha kooxda Naadiga, maamulaha wakiilka ee Ururka Milkiilayaasha Harbor Town Boat Slip.
Howsha lagu nadiifiyo xeebta doonta ayaa ahayd in la dhammeeyo Ciidda Kirismaska, laakiin duufaanta East Coast ayaa dib u dhigtay imaatinka qalabkaas usbuuc ku dhawaad.
Si kastaba ha noqotee, "illaa iyo hadda, wax walbaa waxay u socdeen si habsami leh," ayuu yiri King.
Setzler waa ogolaaday. Laakiin mashruucu si kadis ah uma dhicin. Shaqaaluhu waa inay dayactiraan daadadka godka ka soo baxa oo ay beddelaan qaybo ka mid ah tuubooyinka ay waxyeelloobeen qashin-qubka iyo qashin-qubka oo ay hartay haanta biyuhu. Nadiifinta ballaaran ee bambooyinka iyo miskaha wareersan ee jaraya qeybta hoose ee badda sidoo kale waa loo baahnaa.
Kiraduhu si dhakhso leh ayay u qabsadeen oo u hagaajiyeen daadadkii, wax khasaare ah oo ka soo gaadhayna meelihii lagu ururiyey ma jiraan, sida lagu sheegay warbixinnada maalinlaha ah ee loo gudbiyo maydka.
"Qodista qashinka si dhaqso ah ayaa loo joojiyay, biyona waa la soo tuuray ilaa ay daadadka ka helayaan oo la dayactirayo," ayuu yiri Setzler.
Wuxuu sheegay in burburka yar ee farsamoyaqaannada iyo daadinta ay tahay in laga filo qalab ku shaqeynayay saacadaha 24 maalintii, toddobo maalmood usbuucii.
Baadhitaannada iyo warbixinnada kormeerka ayaa sidoo kale muujinaya in inta ugu badan shaygan loogu qulqulayo badda sida saadaasha, marka laga reebo mooyee go'doominta 100-square-foot oo dhererkeedu yahay dhudhunka sare ee 5.
Setzler wuxuu sheegay in moodeelka ay u badan tahay inuu sababay mug weyn oo ciid ah ku dhawaad ​​15 ilaa 18 cagood oo sare oo laga soo saaray geeska sagxadda bannaanka, oo ay u baahan doonto waqti si ay u disho.
"Waan sii wadi doonnaa inaan kormeerno, oo haddii uusan ku sii fideyn mowjadda, waan geli doonnaa oo waxaan jiidi doonaa dogob si aan u hoos u dhigno ama aan ugu fidinno qodidda," ayuu yiri Setzler.
Howlgallada qodista waxaa si dhow ula socday nidaamiyeyaasha, maadaama ay tahay mashruucii ugu horreeyay ee qodista qodista gaarka loo leeyahay ee gobolka oo loo oggol yahay in qashin qub ah lagu rido biyaha badda gudaheeda, sida ay sheegeen saraakiisha gobolka.
Kormeeruhu waa inuu joogaa inta lagu jiro shaqada oo dhan.
Isku daygii Jimcaha si loo gaaro wakiil ka socda Ciidanka Asluubta Injineerka ayaa lagu guuldaraystay.
Mashruucan ayaa waxaa si gaar ah u maalgalinaya koox milkiilayaal doomaha saaran iyo dadka deggan Badda Badda, iyo sidoo kale marinnada badda 'Pine Resort' iyo 'Gull Point' iyo marinnada 'South Beach marinas'.
Waxaa laga soo qaatay: Xirmooyinka Jasiiradda
Ku bilow mashruuca dayactirka dekadaada Ellicott